ရှင်မင်းယာ ရန်ကုန်မှာတဲ့၊ နာမည်အရင်း မြမြခင်တဲ့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Muslims of Myanmar are Ethnic Minority Citizens of Myanmar
Tin Maung Aye: Mway Pway > Qing Minya ရှင်မင်းယာ ဘာလဲ။ ဘယ်လဲ။
မပြောချင်ပေမယ့်လည်း တဖြည်းဖြည်းအခြေ အနေဆိုးလာမည်ဖြစ်သဖြင့်ပြောရပါေ တာ့မည်။
She always tagged Hmuu Zaw, President U Thein Sein’s office Director, proof of their connection.
ဘင်္ဂါလီကိစ္စမှာကတည်းက သံသယရှိသဖြင့် စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးတွင်တွင်အော်ကာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်ဆွသည်။ သူယုံကြည်လို့ပဲလေဟု နားလည်ပေးခဲ့သည်။ အခုပါတီထောင်မည် ဆိုသည်။ NLD ကိုပြောင်ပြောင် တင်းတင်းတိုက်ခိုက်သည်။ စစ်တပ်ကို သိသိသာသာလော်ဘီလုပ်လာသည်။ သူ့အကြောင်း အရင်ကတည်းက သိထားသော်လည်း အခုလောက်ပြဿနာရှာမည်မထင်၍ လွှတ်ထားပေးလိုက်သည်။ အခုမရတော့။ မပြောမဖြစ်ပြောရ ပါတော့မည်။
အမည်ရင်း မြမြခင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တာမွေမှာနေသည်။ တောင်မြင်းကွင်း လမ်း(Eleven Media ရုံးရှိသည့်လမ်း ) အိမ်အမှတ် ၁၃ ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားပြီး အမက(၁၈)တာမွေတွင်မူလတန်းတက်သည်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံတွင် လေးတန်းကျောင်းသူဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆တွင် အထက(၃)တာမွေမှ ဆယ်တန်းအောင်သည် ။
ဖခင်မှာ ဗိုလ်မှူးခင်မောင်ဦး(ငြိမ်း) ဖြစ်ပြီး မထသ ဗဟိုရုံးမှ ဒုချုပ်ရာထူးဖြင့်အငြိမ်းစားယူသည်။ မိခင်မှာလည်း စစ်သူနာပြု ဗိုလ်မှူးရာထူးဖြင့် အငြိမ်းစားယူသည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာလည်း စစ်တပ်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တကယ့်စစ်တပ်မျိုးရိုးဖြစ်သည်။ တရုတ်သွေးပါ မပါ သိပ်မသေချာ။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီး အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဖြင့်ကျောင်းပြီးသည်။ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း sinma furniture တွင်အလုပ်ဝင်သည်။ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခန့်တွင် မလေးရှားသို့သွားရောက်ပြီး မလေးလူမျိုးတစ်ဦးနှင့်အိမ်ထောင်ကျသည်။ မလေးရှားတွင် private school တစ်ခုဖွင့်ထားသည်။
ဒီလောက်ဆို ဘာဆိုတာသိလောက်ပါပြီ။ အရင်က Kymm Kymm အကောင့်ဖြင့်ရေးသည်။ သူ့မိဘမျိုးရိုး၊ လက်ရှိအိမ်ထောင်ဖက်တို့ကိုကြည့် ခြင်းအားဖြင့် သူအော်နေသောအမျိုးသားရေးနောက်ကွယ်က ဘာတွေရှိလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရလောက်ပါပြီ။
အခု Nov 2013 တွင် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေသည်ဟုသိရပါသည်။ ဆက်လက်၍ အနီးကပ်စောင့်ကြ ည့်နေပါသည်။
Tags: Qing Minya
This entry was posted on November 2, 2013 at 10:25 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “ရှင်မင်းယာ ရန်ကုန်မှာတဲ့၊ နာမည်အရင်း မြမြခင်တဲ့”
mg aung Says:
November 2, 2013 at 11:06 am | Reply
သူ့ယောက်ျား က မ လေး တရုတ် ဖြစ် မယ်
ဒီအတိုင်းဆို ဒီအရေး အခင်း တွေ မှာ မ လေး တရုတ် တွေ ပါ နိုင် တယ် အင် မတန် ယုတ်မာပြီး ဘယ်သူ သေ သေ င တေ မာ ပြီး ရော ဆို တဲ့ ကောင် တွေ ပါ
November 2, 2013 at 11:16 am | Reply
ကျွန်တော် ၂၀၁၁ ကုန်ပိုင်း နဲ့ ၂၀၁၂ နှစ် ဆန်း လောက် မှာ Kl နဲ့ YGN ၃ ခေါက် လောက် သွားဖြစ်တယ် အသွား အပြန် လေ ယာဉ် ပေါ်မှာ မလေး တရုတ်တွေ ကြီး ပဲုမြန်မာ ပြည် မကောင်း ကြောင်း လည်း တလမ်း လုံး Eng လို ပြောလိုက် မလေး လို ပြော လိုက်နဲ့ ဒီ တရုတ်တွေက
November 2, 2013 at 12:42 pm | Reply
Her details should be recorded, give to U.S. Embassy Rangoon and UN Officials to be pulled to ICC because she is ONE of the most active and famous Anti-Rohingya, Anti-Myanmar Muslim and Anti-NLD activist. She is believed to be working together with James mmt and few Myanmar Military Cyber-troopers under Hmuu Zaw, President Office Director. This group is the real INSTIGATOR for all the Islamophobic campaign of Myanmar Military Government.
November 2, 2013 at 1:01 pm | Reply
She was the ONE who attacked the Former Myanmar Ambassador, wife and the whole Embassy staff from Kual Lumpur…She called them “Than Kaung” or worms. To be called back to Myanmar and TO KILL ALL.
LeaveaReply to mg aung Cancel reply